Izindaba - Ungenza kanjani uma ukulahleka kokhiye wemoto?
Xhumana nesiteshi sokulungisa
Lungiselela ukhiye omusha
Uma ukhetha ukuhlomisa isiteshi sokulungisa ngokhiye omusha, kuzodingeka unikeze imoto ne-ID yomnikazi. Ngokuya ngamamodeli ahlukahlukene, isiteshi sokulungisa sidinga umnikazi ukuthi ahlinzeke iphasiwedi enamadijithi ayi-17 yokhiye wokumisa. Le phasiwedi akuyona inombolo yamazinyo, kepha iphasiwedi enikezwa umnikazi lapho uthenga imoto entsha. Kwamanye amamodeli, isiteshi sokulungisa sinikeza umenzi wemoto isitifiketi semoto nomnikazi. Umenzi ubuza iphasiwedi elwa nokhiye wokhiye wokumisa ngokusebenzisa i-database futhi ayithumele ngefeksi esiteshini sesondlo.
Ngemuva kokuthola le phasiwedi, isiteshi sokulungisa sidinga umnikazi ukuthi anikeze inombolo yamazinyo eyisihluthulelo ukumisa ukhiye omusha wensimbi. Uma ingekho inombolo yephrofayili yezinyo, ungabuza inombolo yephrofayili yezinyo ngokusebenzisa i-database. Ngasikhathi sinye, isiteshi sokulungisa singashintsha imingcele yekhompyutha egibele ukusetha ukhiye wemoto olahlekile njengokhiye ongekho emthethweni, kodwa kuphela uma imoto ingakwazi ukuqalwa, nokhiye olahlekile usengavula umnyango. Nasi isikhumbuzi semoto abanikazi: uma ukhiye wemoto utholakale ulahlekile, noma ngabe kukhethwe ukhiye omusha, kufanele uqaphele ukuthi ungagcini izinto eziyigugu emotweni.
Sicela ushintshe ilokhi yemoto ngqo esiteshini sokulungisaNjengoba kusesengozini yokulahlekelwa okuqukethwe yimoto lapho ushintsha ukhiye, ukushintsha ilokhi kuzoqeda le ngozi ngokuphelele. Kodwa-ke, izindleko zokushintsha ilokhi zikhulu kakhulu kunokhiye omusha.Ngokuya ngemodeli ehlukile nemoto, Amalokhi ahlukile. Amanye amamodeli asebenzisa ukhiye ofanayo womnyango, umnyango wegumbi lomthwalo, umnyango wegilavu ​​wegilavu ​​kanye nekepisi likaphethiloli. Ngalesi sikhathi, uma lonke ilokhi lemoto lifakwa esikhundleni, izingidi ezidinga ukushintshwa ziyaqhathaniswa.
Ngokuvamile, izindleko eziphelele zokhiye omusha ziyahlukahluka kusuka kuma-yuan angama-300 kuye kuma-yuan angama-2 000, kepha izindleko zokuvuselela ukuvalwa kwemoto zingaphindeka izikhathi ezi-4 kuye kwezingu-5 zokushintshwa kokhiye, futhi ukushintshwa kokhiye imvamisa nakho Akukho ngaphakathi ububanzi bezimangalo zenkampani yomshuwalense, ngakho izindleko ziphakeme.
Ngokuvamile, ukhiye omusha ungafakwa emahoreni ambalwa, kepha amamodeli okunethezeka esezingeni eliphakeme adinga isikhathi esithe xaxa, ngoba ezinye izimoto ezisezingeni eliphakeme ezingenisiwe zidinga ukuqedela inqubo yokukhipha nokulahla ukhiye wokuqala endaweni yokukhiqiza. Izimoto ezisezingeni eliphakeme zinamazinga aphezulu wokuqhekeka kwephasiwedi nokuqhathanisa namanani aphezulu.